Tun Tun's Photo Diary: July 2011
သက်သက်လွတ် ဖတ်ထုပ် (Ready Made) ထမင်းအိုး ထဲ ထည့်ပေါင်းထားတာ။
ဒါက သက်သက်လွတ်ပြည်ကြီးငါး ဟင်းပါ ပဲငပိနဲ. ချက်ထားပါတယ်။ တခါတလေ အတုက အစစ်ထက်ပိုကောင်းတယ် မှန်တယ်။ အစစ်က မှ ညှီနံ. ရသေးတယ်။ အတုက နုနုအိအိလေး ဘာအနံ.မှ မရှိဘူး။ လှလှလေး ဓါးနဲ.မွန်းထားပြီးသား။
at 7/22/2011 06:27:00 PM Links to this post 1 comment:
at 7/14/2011 09:28:00 AM Links to this post4comments:
at 7/09/2011 02:54:00 AM Links to this post2comments:
ပထမဆုံး ရန်ကုန် မနက်ခင်းပါ။ ၇နာရီ ခွဲလောက် နိုးတယ်။ ၀ရန်တာ ထွက်ကြည့်လိုက်တော့ ပထမဆုံး အကြော်ဆိုင်ကို တွေ.တယ်။ Zoom ကို အဆုံးထိ ဆွဲထည့်လိုက်တယ်။ ညက မိုးကောင်းထားတော့ လမ်းမှာ ရေတွေနဲ.။
ဒါက Zoom မဆွဲ တဲ့ပုံ။ တွေ.လား အကြော်ဆိုင်က ပိစိလေးရယ်။း)
at 7/07/2011 05:21:00 AM Links to this post7comments:
at 7/05/2011 06:23:00 AM Links to this post7comments: